2x16 iPad News Podcast: Apple in 2016, filashooyinka iyo xanta | Wararka IPhone
Waxaan ku soo gabagabeynay sanadkii barnaamijkayaga 'podcast' iyadoo ka hadleyno wararka xanta ah ee horeyba u jiray ee ku saabsan iPhone 6c iyo 7 ee soo socda, iyo sidoo kale muujinta liiskayaga rabitaanka ee ah waxyaabaha cusub ee aan rabno 2016 marka la eego alaabada iyo barnaamijyada Apple. Dib u eegis ku saabsan waxa sanadka 2016 noqon karo, ama waxa aan jeclaan lahayn inuu noqdo. Guuldarrooyinkii caadiga ahaa (sannadka kuma dhamaysan karnay podcast iyada oo aan cillad farsamo la helin), waxaan sagootinaynaa sannadka 2015 waxaan sugeynaa sannadka 2016-ka.
Dhageyso »2 × 16: Tufaaxa sanadka 2016, filashooyinka iyo xanta» Spreaker.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » 2 × 16 Podcast ee Actualidad iPad: Apple sanadka 2016, filashooyinka iyo xanta
Laba aqoon isweydaarsi cusub oo farshaxan iyo sawir qaadis ah ayaa imanaya Apple Stores
Madaxa naqshadeynta Android ayaa ku dhaleeceeyay macruufka "culus oo culus"